News 18 Nepal || दोस्रो बिहे गर्दै बलिउड अभिनेत्री दिया मिर्जा
दोस्रो बिहे गर्दै बलिउड अभिनेत्री दिया मिर्जा
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री दिया मिर्जाले दोस्रो बिहे गर्ने भएकी छन् । उनले व्यवसायी वैभव रेखीसँग बिहे गर्न लागेकी हुन् । वेभव र दिया आगामी सोमबार (फ्रेबुअरी १५) विवाह बन्धनमा बाँधिन लागेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
विवाहमा परिवारका सदस्य र नजिकका साथीहरु मात्रै सहभागी हुने बताइएको छ । उनीहरु केही समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेको बताइएको छ । वैभव मुम्बईका एक व्यापारी हुन् । उनी मुम्बई बान्द्राको पालीहिल क्षेत्रमा बस्छन् ।
दियाको पहिलो विवाह सन् २०१४ मा साहिल सांगासँग भएको थियो । उनीहरु विवाहको पाँच वर्षपछि सन् २०१९ मा छुट्टिएका थिए । त्यतिबेला दियाले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूले साहिलसँग सम्बन्धविच्छेद गरेको जानकारी गराएकी थिइन् ।
मलाइ र अर्जुनको विवाह हुन लागेकै हो ?
अभिनेत्री दीया मिर्जाले गरिन् विवाह, को हुन् दुलाहा ?
सुशान्तको सम्झनामा बहिनी श्वेताको भावुक सन्देश
ऐश्वर्यामाथि गम्भीर आरोप, किन दिइनन् स्पष्टिकरण ?
जब प्रियंका चोपडा ब्वाइफ्रेण्डसँग कोठामा रंगेहात समातिन्
अभिनेता सूर्यालाई कोरोना संक्रमण
के श्रद्धा कपुरले रोहन श्रेष्ठसँग गर्दै छिन् विवाह ?
इतिहासको भयानक महामारी, जसले मानिसहरु नाचेरै मरे
जहाँ युवतीहरुले किन रोज्दैछन् भाडाको बेहुला ?